Afar dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay gobolka Jubbada Hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAfar dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay gobolka Jubbada Hoose
November 4, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Afar dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku geystay.
Bayaan maanta oo Axad ah soo baxay, Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyntu ay ka dhacday deegaanka Araare ee gobolka Juubada Hoose Sabtidii.
Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa intaas ku daray in aysan jirin wax shacab ah oo ku dhaawacmay ama ku dhimatay duqeynta.
“Duqeynta ayaa la qaaday kadib markii maleeshiyo hubeysan ay damceen in ay weeraraan ciidamo saaxiibada nala ah oo ku jiray ilaalo. Ma jirin askar Mareykan ah oo ku sugnaa dhulka inta uu socday howlgalka oo ay hoggaaminayeen ciidamada Soomaalida ah.” Ayay ku dhaheen bayaanka.
Garoowe-(Puntland Mirror) Duqa magaalada Garoowe Xasan Maxamed Ciise oo loo yaqaan Goodir oo kaashanaya dhalinyaro iska wax u qabso ku shaqaynaya ayaa maanta oo Axad ah magaalada Garoowe ka bilaabay olole nadaafadeed si kor loogu [...]
Bosaso-(Puntland Mirror) At least three people were wounded after gunmen threw a hand grenade at the district court in Bosaso port town, witnesses confirmed to Puntland Mirror. The wounded people were rushed to hospitals in [...]